Ady & Fifandirana · Febroary, 2022 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Febroary, 2022
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Febroary, 2022
Mivondrona ho fanohanana an'i Okraina ny Zeorziana raha sahirana hamaly ny solombavambahoaka
Azia Afovoany sy Kaokazy 28 Febroary 2022
Olona an'aliny no nidina an-dalambe tao an-drenivohitra Zeorziana, Tbilisi mba hanameloka ny fanafihan'i Rosia an'i Okraina.
Fifandraisana iraisam-pirenena 25 Febroary 2022
Nomelohin'ny Fitsarana ao Krimea bodoin'i Rosia higadra enin-taona an-tranomaizina ilay mpanao gazety mahaleotena
Eoropa Afovoany & Atsinanana 23 Febroary 2022
Notazonina tao Crimea i Vladyslav Yesypenko tamin'ny volana Marsa 2021 noho ny fiahiahiana azy ho nanangona vaovao ho an'ny fitsikilovana Okrainiana, fiampangana nolavin'ilay mpanao gazety. Voalaza fa niaritra fampijaliana izy raha tany am-ponja.
Toherin'ny mpikatroka ao Myanmar ny famarotana ny orinasam-pifandraisandavitra Telenor amin'ny orinasa mifandray akaiky amin'ny miaramila
Azia Atsinanana 20 Febroary 2022
"Tsy nifampidinihan-dry zareo ny olona manao vivery ny ainy amin'ny fanoherana ny fitondra-miaramila, izay eo am-pelatanan'ny Telenor ny ainy."
Azerbaijan: Lehilahy iray nosamborina noho ny tsy fanajana sainam-pirenena
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Febroary 2022
Ity angamba no tranga voalohany nahitana fanoherana mahery vaika avy amin’ny vahoaka mikasika ny olona tsy manaja ny sainam-pirenena vahiny tao Azerbaijan.
Kosovo taona 1999 sy Rosia 2021: Mampirongatra propagandy mampidi-doza ny fironana hanamboatra sary miova tokotanin-tsehatra na ‘cheapfake’
Eoropa Afovoany & Atsinanana 14 Febroary 2022
"Zava-dehibe ny mampahafantatra ny fielezan'ny fikirakirana sary novaina tokotanin-tsehatra sy ny fanekena fa mampiasa io fomba fanao io ny governemanta sasany mba hitarika fanovana ny hevi-bahoaka."
Manamarika ny tsingerin-taonan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny ‘fitokonana mangina’ ireo hery mpanohana ny demaokrasia ao Myanmar
Azia Atsinanana 08 Febroary 2022
“Nandà tsy hamela ny tenan'izy ireo ho lasa andevon’ny miaramila indray ny vahoaka, ary tsy ho kivy mihitsy”.